Tue, Jul 14, 2020 at 6:12am
रसुवा। कोभिड –१९ का कारण रसुवागढी नाकाबाट बन्द व्यापारिक कारोवार पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सीमा क्षेत्रका अधिकारी सहमत भएका छन्। नेपाल र चीन दुई देशका अधिकारीबीच बुधबार अपराह्न रसुवागढीस्थित मितेरी पुलमा सम्पन्न वार्तामा स्वास्थ्य परीक्षण, सीमा क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा, क्वारेन्टिन जस्ता व्यवस्थापनबाट कारोवार अगाडि बढाउने सहमति भएको हो। दुवै देशका नागरिक आवतजावतमा भने यथावत् रोक लगाई अब चिनियाँ सवारी साधनले नै मितेरी पुलसम्म..
स्थायी कमिटीमै एमसीसीको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउने ओलीको कसरत
काठमाडौं, ११ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एमसीसीलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा मत बाझिएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी संसदको यही अधिवेशनमा पारित गराउनेगरि अन्तिम गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । यही सेरोफेरोमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकसमेत सुरु भएको छ । स्थायी कमिटीमा ओली स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड..
काठमाडाैं, ११ असार । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओसँग टेलिफोन संवाद गरी द्विपक्षीय वार्ता गरेका छन् । संवादका क्रममा उनीहरूबीच दुवै पक्षले कोभिड-१९ महामारीको विरुद्ध लड्न अनुभव आदानप्रदान गर्दै महामारीका कारण मानव जीवनको क्षतिप्रति सहानुभूति र संवेदना पनि व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री र विदेश मन्त्रीले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरिएको संरक्षण र हेरचाहको..
काठमाडौं, ११ असार । गण्डकी प्रदेशमा थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । म्याग्दी मंगला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिका, स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिका, बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका, नवलपुरका गरी थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले जानकारी गराएका छन् । योसँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७ सय ५३ पुगेको छ..
रुकुम हत्याकाण्ड: वडाध्यक्षसहित २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश
रुकुम, ११ असार । रुकुम जिल्ला अदालतले साेती मुद्दाबमा वडाध्यक्षसहित २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश विद्याराज पौडेलको इजलासले वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २३ प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै एक जनालाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न र तीन जनालाई तारेखमा छाड्न आदेश भएको रुकुम जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिए । मुद्दा पुर्पक्षका लागि..
एमसीसी कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप्न पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै सरकार
काठमाडौं, ११ असार । एमसीसी सम्झौता असार १६ सम्म पनि संसदबाट अनुमोदन नहुने भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप्न एमसीसीका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार मन्त्रालयमा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा कोफरोथले यसबारे एमसीसी मुख्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले मंगलबार..
शीर्ष नेताहरूसँग राष्ट्रपतिको भेटवार्ता: राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकजुट हुन आग्रह
काठमाडाैं, ११ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले भौगोलिक अखण्डताका लागि दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता देखिएकोमा सरकार तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई धन्यवादसमेत दिएकी छन् । राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुख तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुधबार साँझ राष्ट्रपति निवास शीतलमा बोलाउनु भई समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने क्रममा यस्तो धारणा राखेकी छन् । राष्ट्रपतिले..
जनार्दन शर्माले किन गरे पार्टी सचिवालय खारेजीको माग ?
काठमाडौं। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको सचिवालय खारेजीको माग गरेका छन्। बुधवारबाट शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा एजेण्डाका विषयमा शर्माले सचिवालय खारेजीको माग गरेका हुन्। बैठक सुरु भएलगत्तै नेता उनले सचिवालय खारेजी माग राखेका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘कोरोनाको महामारी छ। सरकारको काम केही देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा तत्काल बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने निकाय सचिवालय हो..
अदालतको अवहेलना मुद्धामा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कोरोना भाइरस संक्रमण, विदेशमा अलपत्र नागरिकहरुको उद्धारलगायत सात वटा सार्वजनिक सरोकारको रिटमा दिएको आदेश कार्यान्वयनबारे जवाफ दिन सर्वोच्च उपस्थित हुन भनेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सरकारले कोरोना महामारीका समयमा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्धा दायर..
'सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याए मात्र दिगो विकास सम्भव छ'
हेटौँडा। वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व ल्याएको भए पनि अहिले समाजमा मानिसको सोच, चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेमात्र विकासको पूर्वाधार दीगो हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सातौँ नगरसभा बैठकको आज हेटौँडामा उद्घाटन गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको सहकार्यबाट जनतालाई विकासको पूर्वाधारप्रति दीगो लाभ पुग्ने योजना तर्जूमा गर्ने वातावरण तयार गर्न नगरसभाले..
काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको आजदेखि शुरु भएको बैठक अध्यक्षद्वयको मन्तव्य र कार्यसूची तय गरी यही शुक्रबार पुनः बस्ने गरी सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्षद्वयले सरकार, पार्टी र समग्र स्थिति तथा वर्तमान..
नेविसंघले जलायो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति बाँस्कोटाको कुर्सी
काठमाडाैं, १० असार । नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको कुर्सी जलाएका छन्। बुधबार दिउँसो विभिन्न माग लिएर त्रिवि उपकुलपति कार्यालय पुगेका नेविसंघ कार्यकर्ताले उपकुलपतिको कुर्सी जलाएका हुन्। आफ्ना कार्यकर्ताका मागबारे वेवास्ता गर्दै अपमानित गरेपछि उपकुलपतिको कुर्सी जलाउनुपरेको नेविसंघ त्रिवि समितिका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए। उपकुलपतिको कार्यपक्षबाट कुर्सी बाहिर लगेर त्रिवि हाताभित्रको सडकमा नेविसंघले जलाएका हुन्। नेविसंघका..
आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति छाडेर गल्ती गरेँ: अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं, १०, असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति छाडेर गल्ती गरेँ भन्ने महसुस भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीमा अहंकार बढेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कडा आक्रोश पोखे । बैठकमा प्रचण्डको कडा प्रस्तुति सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निराश बनेको अनौपचारिक..
कोरोनाको महामारीकैबीच राष्ट्रपतिकाे रात्रिभाेज, कसकसलाई गरियो निम्ता ?
काठमाडौं, १० असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न दलका नेतालाई शीतलनिवास बोलाएकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले रात्रिभोजको व्यवस्थासहित सबै दलका नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ । नेताहरूलाई साँझ पाँच बजे आइपुग्ने गरी निम्ता गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले भने यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने,’यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । यदी कार्यक्रम हुने भएपनि..
८५ वर्षीया वृद्धालाई ठगेको आरोपमा अष्ट्रेलियामा २ नेपाली पक्राउ
सिड्नी, १० आसार । अष्ट्रेलियामा ठगी गरेको आरोपमा २ नेपाली प’क्राउ परेका छन् । उनीहरु सिड्नीमा बस्ने ८५ वर्षीया वृद्धालाई ठगी गरेको आरोपमा समातिएका हुन् । प’क्राउ परेकाहरु १९ वर्षका आयुष भट्टराई र २२ वर्षीया नेहा गिरी रहेका छन् । सिड्नीको टेलिभिजन न्युज ९ का अनुसार उनीहरुले ती ८५ वर्षीय वृद्धालाई बैंकको खातामा समस्या आएको र नयाँ खाता बनाउनु पर्ने भन्दै टेलिफोन..
एमसीसी विवादले ल्यायाे प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच दरार
काठमाडौं, १० असार । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले सत्तारुढ नेकपाभित्र फाटो ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बीचमा यसले दरार उत्पन्न गरेको छ । एमसीसीकै कारणले थाती अन्य विवाद पनि सतहमा आउने संकेत देखिएको छ । पछिल्लो समय एमसीसीका प्रावधानहरुलाई लिएर तीव्र विवाद..
कर्णालीका ४ स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प
सुर्खेत, १० असार । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका ४ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । अस्पताल निर्देशक मंगल रावलका अनुसार सेवा प्रवाह गरिरहेको खण्डमा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि आकस्मिकबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरिएको छ । ‘कोभिड १९ को रोकथामका लागि गरिनुपर्ने सम्पूर्ण नियमहरू पालना गर्न अनुरोध..
विद्युत् प्राधिकरणका आठ जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं, १० असार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरणको सप्टवेयर बिलिङबाट २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गर्ने आठ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाअनुसार बर्दिवास शाखाका तत्कालीन इन्चार्ज सञ्जीव शर्माविरुद्ध २० लाख ३३ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ बराबर अपचलन गरेको मुद्दा दायर गरिएको छ । बर्दिबास उपकेन्द्रका तत्कालीन ज्यालादारी कर्मचारी अरविन्दप्रसाद जयसवालविरुद्ध सोही..
आजबाट नेकपाको स्थायी समिति बैठक: एमसिसीका विषयमा निर्णय लिने
काठमाडाैं, १० असार। लामो समयको रस्साकस्सी पछि आज (बुधबार)बाट सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक सुरु हुँदैछ । पटक पटक बैठक टार्दै आएका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसीका विषयमा दबाब बढ्दै गएपछि बैठक डाकेका हुन् । बैठकमा अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विशेष छलफल हुने भएको छ । असार १६ गतेभित्र संसदबाट एमसीसी पास..
चीनले गर्‍यो नेपालका ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण
काठमाडाैं, १० असार । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसित वर्षौंदेखि रहेको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद सुल्झन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलाका १–१ नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको छ । संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी)..
सर्लाहीबाट लेखा लेखापाल र अधिकृत घुससहित पक्राउ
काठमाडौं, १० असार। सर्लाहीको हरिपुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका लेखा अधिकृत र लेखापाल घुससहित पक्राउ परेका छन् । लेखा अधिकृत भुपेन्द्र कुमार सिंह र लेखापाल रन्जित कुमार राय यादवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले चार हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको हो । विज्ञान प्रकाशन बापतको भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको सूचना एवम् उजुरीका आधारमा बर्दिवासबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको अख्तियार दुरुपयोग..
नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई ७ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना
मंगलवार, आषाढ ९, २०७७ साल
काठमाडौं, ९ असार । झुठो विवरण दिएर नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई ७ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लिने विषयमा सहमति जुटाएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक..
नेकपा स्थायी समिति बैठकबारे छलफल गर्न ओली-प्रचण्ड भेटवार्ता
काठमाडाैं, ९ असार । बुधबार हुने भनिएको पार्टीको स्थायी समिति बैठकको एजेण्डा तय गर्नेबारे छलफल गर्न नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार छलफल भइरहेको हो। ‘छलफलका लागि उहाँ बालुवाटार जानु भएको हो। छलफल जारी छ,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए। बुधबारका लागि स्थायी समिति बैठक डाकेपनि एजेण्डा तय भएको..
नेपाल–भारत-चीन सीमाको १ नम्बर पिलरसम्म पुग्याे सशस्त्रको गस्ती
दार्चुला, ९ असार । व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरुमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्टमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले नेपाल–चीन सीमाको १ नम्बर पिलरसम्म गस्ती गरेको छ। गत वैशाख ३१ गते व्यासको छाङ्गरुमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी एक महिनापछि नेपाल–चीन सीमा स्तम्भमा पुगेको हो । छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरीको २५ जनाको टोली रहेको छ । सो टोलीले पहिलो पटक सीमा पिलरसम्म गस्ती बढाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल..
अष्ट्रेलियाबाट आज पहिलो ‘उद्धार’ उडान, २ सय ५९ नेपाली काठमाडौं फर्किंदै
सिड्नी, ९ असार । अष्ट्रेलियाबाट आज पहिलो ‘उद्धार’ उडान हुँदैछ । नेपाल एयरलाइन्सको अन्नपूर्ण जहाजमार्फत् २५९ जना नेपालीहरु अष्ट्रेलियाबाट काठमाडौं फर्किन लागेका हुन् । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सिड्नीबाट स्थानीय समयअनुसार १ बजे काठमाडौंतर्फ उड्ने छ । सो जहाजमा लकडाउनका कारण चार महिनादेखि अलपत्र परेका नेपालीहरु छन् । उनीहरु आफ्ना छोराछोरीलाई भेट्न अष्ट्रेलिया आएका अभिभावकहरु हुन् । सो फ्लाइटमा न्यूजिल्याण्डमा रहेका ११ जना..
कर्णाली प्रदेश सभाबाट दुई विधेयक सर्वसम्मत पारित
सुर्खेत, ९ असार। कर्णाली प्रदेश सभाबाट हिजो, ८ असारमा दुई विधेयक पारित भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको २०औँ बैठकले ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७५ र ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७५ र उद्योग,..
सुदूरपश्चिममा थप १ सय ३७ जनामा काेराेना पुष्टि, संक्रमितकाे संख्या ९ सय ७५ पुग्याे
कैलाली, ८ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप १३७ जना कोभिड १९ संक्रमित पुष्टि भएको छ । सोमबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंमा गरिएको परिक्षण वाट थप ९६ ,सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट ४१ को परिक्षण बाट १३७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै कृयाशिल संक्रमितको संख्या ९७५ पुगेको छ । यस अघि नै १६५ जना संक्रमित निको भइ घर गइइसकेका छन भने ४..
अंगीकृत नागरिकताकाे प्रावधानविरुद्ध जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन
जनकपुरधाम, ८ असार । नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने विषय राखेको विरोधमा सोमबार साँझ जनकपुरधाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला दहन गरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सात बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो । स्थानीय भानु चोकमा जम्मा भएका जनता समाजवादी पार्टी..
कैलालीकाे क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका एक व्यक्तिकाे मृत्यु
कैलाली, ८ असार । कैलालीमा क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका एक व्यक्तिको सोमबार मृत्यु भएको छ । जिल्लाको लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का ३६ बर्षका पुरुषको सोमबार साँझ मृत्यु भएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । उनी बालसेवा माध्यामिक बिद्यालयको क्वारेन्टाइनबाट आइतबार मात्रै घर फर्किएका थिए । उनलाई आइतबार आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरी एन्टीबडी नेगेटिभ आएपछि घर पठाइएको स्वास्थ्य शाखाकी प्रमुख जयन्ती बिसीले जानकारी..
एमसीसीको विरोधमा ११ दलले गरे संघर्षको कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौं, ८ असार । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोधमा विभिन्न ११ दलले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । ११ दलले सोमबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सो सम्झौता राष्ट्रघाती रहेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पूर्ण समर्थनको सुनिश्चितताका आधारमा ओली यसलाई पारित गराउने दाउमा लागेको..
Results 9851: You are at page9of 329